Iindaba - Izinto zokuqala kuqala: Iindidi zeBong
Ekugqibeleni imilo, ubungakanani, kunye nokuphakama kweglasi yegong kunefuthe layo lokutsala umsi kwigumbi lamanzi kunye nakwityhubhu. Ngapha koko, ububanzi besitya kunye nesiqu sikwachaza ukuhamba komsi nomoya. Ezinye zeendidi zeglasi zeglasi zibandakanya:
I-Percolator Bong: I-percolator bong isebenzisa isihluzo seglasi esimiswe kwigumbi lamanzi. Isihluzi sinoxanduva lokwahlula kunye nokusasaza amaqamza ngokulinganayo ngokuqinisekisa ukuba umsi ujikeleziswa emanzini. Isiphumo kukudalwa kweebhabhu ezincinci, ezibalaseleyo ekucoceni izinto ezinobuthi ngelixa zipholisa umsi.
I-Bubbler Bongs: Le glasi yokhula i-bong yi-bong kunye ne-pipe hybrid. Lukhetho oluphathekayo oluthe tyaba. Ibandakanya igumbi lokuwisa amanzi elipholileyo kwaye licoca umsi. Xa usebenzisa i-bubbler, lumka ungatsali kakhulu, kungenjalo uya kuginya amanzi.
I-Mini Bongs: Xa ufuna ii-bongs ezincinci, i-mini bong ephathekayo yeyona ndlela ilungileyo kuwe. Unokufumana ii-minis ezi-intshi ezintandathu kuphela ukuphakama, kwaye ezininzi ziyafumaneka ngaphantsi kwe- $ 60. Uninzi lwee-bongs ezincinci zixhomekeke kwinkqubo ye-carb. Ngenxa yexabiso eliphantsi, zihlala zenziwe ngeglasi encinci, ekulula ukuyaphula.
Inzululwazi yeze Bongs: Eli ligama elinikwe i-bongs yeglasi ye-borosilicate yeglasi. Ezi zixhobo zibiza kakhulu kuba zomelele ngokuchasene nobushushu. Uyilo lunokwahluka ukusuka kumbhobho olula othe ngqo ukuya kwi-bong entsonkothileyo ene-ash catchers, i-percolator eyenzelwe ngokukodwa, kunye nemilomo egotyiweyo.